सेशेल्स राष्ट्रपति राष्ट्रिय दिन ठेगाना एक देश र एक व्यक्तिको कुरा गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » सेशेल्स राष्ट्रपति राष्ट्रिय दिन ठेगाना एक देश र एक व्यक्तिको कुरा गर्दछ
24 मिनेट पढ्ने
सेशेल्स अध्यक्ष - प्रतिलिपि
सेशल्स गणतन्त्रका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जेम्स मिशेलले सोमबार, जून २,, २०१ 29 को स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा दिएका भाषणमा पूरा पाठ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
सेशेल्सका प्रिय मानिसहरू,
तपाईको महामहिम श्री टोमी रेमेन्साउ, पलाउ गणराज्यका अध्यक्ष,
राष्ट्रपति जेम्स रिचर्ड मानछम,
उप-राष्ट्रपति डैनी फ्यूरे,
उप-राष्ट्रपति जोसेफ बेलमन्ट,
मोन्सिएर ले प्रफेट डे ला क्षेत्र रियुनियन,
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष,
अपील अदालतको अध्यक्ष,
कार्यवाहक चीफ जस्टिस
मोन्सिएर ले कमांडेंट सुपेरियुर डेस फोर्सेन्स फ्रान्सेइस डे ल'कान इन्डियन,
मोन्सिएर ले कमांडेंट डे ला गेन्डरमेरी नेशनल,
राष्ट्रिय सभामा सरकारी व्यवसायका नेता,
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता,
तपाईंको महानिर्देशक कूटनीतिक मिसनहरूको प्रमुख,
हो, मलाई 39 years बर्ष पहिले याद आयो, त्यस दिन हजारौं सेचेलोइसले जस्तै त्यो रात हाम्रो सानो देश स्वतन्त्र राज्य बनेको थियो।
पुरानो स्टेडियमको सानो अस्पष्ट कुनाबाट मैले त्यो गौरवशाली घटना देखेको थिएँ, जुन ऐतिहासिक थियो। खुशीको त्यो पल। महिमाको त्यो क्षण, आशाको त्यो क्षण जुन सबै सेचेलोइसलाई पर्खिरहे र साझा गरिरहेका थिए। हाम्रो गन्तव्यको साथ एक भव्य मिति।
२ June जुन १ 29 of1976 को मध्यरात्रि, राष्ट्रपति जेम्स मन्चम र प्रधानमन्त्री अल्बर्ट रेने - सेशेल्सको इतिहासका दुई ठूला व्यक्तित्वहरू, जसलाई आज हामीले विशेष श्रद्धांजलि चढाएका छौं - नयाँ सेशल्स झण्डालाई अभिवादन गरे जसरी यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। युनियन ज्याक कम गरिएको थियो। एउटा गणतन्त्रको जन्म भएको थियो। एक उपनिवेश अब थिएन। हामीले सेचेलोइसले हाम्रो भाग्यलाई आफ्नै हातमा लियौं। हामीलाई थाहा थियो कि हाम्रो अगाडीको बाटो लामो र गाह्रो हुनेछ। हामी अगाडि भएका चुनौतिहरूका बारे सचेत थियौं, तर हामी तीहरू पार गर्न कटिबद्ध छौं। हाम्रो दृढ संकल्प, एक स्वतन्त्र र स्वतन्त्र मान्छे को आशा बाट प्रबलित।
तपाईको महामहिम श्री श्री टोमी इसाang रेमेन्सेसा,
पलाउ गणराज्यका राष्ट्रपति,
महिला र सज्जन,
हाम्रो राष्ट्रिय दिवस समारोहको लागि हाम्रो अतिथिको अतिथिको रूपमा सेशेल्समा तपाईंलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी गर्व र सम्मानित छौं। दिगो विकास र नीलो अर्थव्यवस्थाको प्रबर्धन गर्न सानो द्वीप विकास राज्यहरूले सामना गरिरहेका विशिष्ट चुनौतिहरूको गहिराइ साझा गर्ने हाम्रा सँगी टापुका भाइबहिनीहरूसँग हाम्रा उपलब्धिहरू साझा गर्न पाउनु सँधै खुशीको कुरा हो।
सेशेल्स र पलाउ स्वाभाविक रूपमा दुई देशहरू हुन् जुन हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रमा "स्थिरता" छन्। र हामी बोल्न जारी राख्नको लागि हाम्रो प्रयासमा एकजुट छौं, चर्को र कडा आवाजले, SIDS को एक आवाज, बाँकी विश्वलाई सुन्न दिलाउन! विशेष गरी मौसमको कार्यको यस वर्षमा। ग्लोबल आइल्याण्ड पार्टनरशिप (जीएलआईएसपीए) को संयुक्त संयुक्त अध्यक्षताबाट सेशेल्स र पलाउले साझा गरेको अनुकरणीय कामका सम्बन्धमा म श्रद्धांजलि अर्पण गर्छु। हाम्रो अनुकरणीय कामकाज सम्बन्धले गत वर्ष सामोआ सम्मेलन र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हाम्रो सहभागिता मार्फत, साना द्वीप राज्यहरूको एलायन्स (AOSIS) मा पनि बल पाउँछ। हाम्रो प्रयास फलदायी छ। हामी सँगै फरक पार्न सक्छौं, सँगै हामीले भिन्नता गरेका छौं र हामी भिन्नता ल्याउँदछौं! धन्यवाद, श्रीमान राष्ट्रपति र तपाईको प्रतिनिधिमण्डल।
मोन्सिएर ले प्रिफेट डे ला क्षेत्र रियुनियन
तपाईंलाई पनि, म यो भन्न चाहन्छु कि यस अविस्मरणीय अवसरमा तपाईंहरू माझ हामी भएकोमा हामी कत्ति सम्मान र खुसी छौं। इतिहासले अनुकरणीय सम्बन्धको उत्पादन गरेको छ - सेशेल्स र रियुनियन बीच अद्वितीय भन्न मिल्दैन। अहिले सम्म कुनै पनि अनिश्चितताले हाम्रा बिच भाईचारे सम्बन्ध, मैत्री र आपसी सम्मानलाई दन्त गर्न सकेको छैन। आज, हामी एउटा सुअवसर पाएका छौं र सेशेल्समा हामीसँग भएकोमा म तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु।
सेशेल्सका प्रिय व्यक्तिहरू
हामीले धेरै स्वतन्त्रता पाएका छौं। यो निर्विवाद छ। हाम्रो व्यक्तिको पहिचानको सिर्जना र पुष्टि। एक मान्छे, एक राष्ट्र। शिक्षामा प्रगति। स्वास्थ्यमा। आवासमा। वृद्धको हितमा। युवा सेचेलोइस को लागी अवसरको सिर्जना। व्यवसायको विकास र फस्टाउन। सेचेलोइसको सशक्तिकरण। कुल घरेलू उत्पादनको बृद्धि। हाम्रो जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार। हाम्रो जनताको सामाजिक न्याय र मर्यादाको सुदृढीकरण। सेशेल्सको छवि विदेशमा विकिरण। यति धेरै तत्वहरू छन् जुन प्रगति प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन हामीले सँगै हासिल गरेका छौं। सँगै, हाम्रो पसिना, हाम्रो संकल्प र लचिलोपनको साथ, हामीले हाम्रो सेशेल्स निर्माण गरेका छौं। एक सम्पन्न सेशेल्स उच्च आयको स्तर, र एक उच्च विकास सूचकांकको साथ। आधा अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीमा विदेशी विनिमय सञ्चयको साथ एउटा सेशेल्स।
साँच्चै, धेरै प्रगति, धेरै उपलब्धि, र धेरै रूपान्तरण, जुन हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो, विगत years over बर्षमा हाम्रो जनताको सन्तुष्टि।
आज, हामी Independ th औं वार्षिकोत्सव वा स्वतन्त्रता मनाउने क्रममा हामी सबैको भविष्यका लागि हेर्ने समय आएको छ। हाम्रो मतभेदलाई एकातिर राख्नुहोस् र हाम्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्नुहोस् एउटा देश एक मान्छे। हामी विगतका गल्तीहरू ठीक गर्न हाम्रो प्रयासलाई जारी राखौं। तर एकै साथ, आउनुहोस् र ती सकारात्मक कुराहरूको लागि हामी कृतज्ञ छौं जसले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्‍यायो। आउनुहोस्, हामी सबै फाइदाहरूका पहिचान र यसको मूल्या appreciate्कन गरौं: हाम्रो देशको स्थायित्व, यसमा शासन गर्ने शान्ति, र हाम्रो राष्ट्रिय एकता। आज सबै सेचेलोइस लाई मेरो सन्देश छ। शान्ति र एकताको सन्देश। प्रेम, करुणा र एकताको सन्देश। यही कुराले हामीलाई अझ ठूलो समृद्धितर्फ लानेछ।
हाम्रो स्वतन्त्रता पछि धेरै चीजहरू परिवर्तन भएको छ। सेशेल्सले अपूर्व रूपान्तरणको अनुभव गरे। हामीले सेशेल्सलाई प्रगतिको देश बनाउनका लागि यसलाई परिवर्तन गर्न जारी राख्नुपर्दछ। हामीले सेचेलोइसका लागि अझ बढी समृद्धि ल्याउनको लागि हामीले हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्न जारी राख्नुपर्दछ।
त्यो मेरो सरकारको काम हो। एक सक्रिय सरकार, गतिशील र जिम्मेवार र मानिसहरूसँग सँधै सम्पर्कमा रहन्छ। यसले आफ्नो फाइदाको संरक्षणको उपायहरू खोज्दछ, र वातावरण सिर्जना गर्न जारी राख्दछ, र उपायहरू राख्दछ, अझ ठूलो समृद्धि ल्याउन र हाम्रो जनताको भलाइ बढाउन।
व्यक्तिसँग जोडिएर रहनु भनेको सँधै उनीहरूतर्फ जान्छ। प्रशासनमा उनीहरूलाई समावेश गर्दै, निर्णयहरू जुन उनीहरूको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छ। मानिसहरूलाई तिनीहरूको समुदायहरू, जिल्लाहरू, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र र प्रभावशाली तरिकाले व्यवस्थापन गर्न शक्ति दिनुहोस्। जिल्ला प्रशासनसम्बन्धी नयाँ विधेयकको उद्देश्य यही हो कि सरकारले चाँडै राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव गर्ने छ। यसले प्रत्येक जिल्लालाई जिल्ला परिषदको व्यवस्था गर्नेछ जुन जिल्लाका बासिन्दाहरू द्वारा सिधा निर्वाचित छ। यो हाम्रो लोकतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणको लागि अझै अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हो।
हाम्रो समृद्धि मुख्यतया हाम्रो उत्पादकता र आर्थिक गतिविधि मा निर्भर गर्दछ। पर्यटन र मत्स्यपालन लामो समयदेखि हाम्रो अर्थव्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भ बनेको छ। हामी उनीहरूमा पर्याप्त निर्भर छौं। तिनीहरू रोजगार, लगानी उत्पन्न गर्छन् र तिनीहरू हाम्रो अर्थव्यवस्था र बजेट स्रोतहरूको प्रमुख मोटर्स हुन्।
अर्को क्षेत्र जुन म सँधै जोड दिन्छु - र जसमा म निरन्तर जोड दिन्छु - सानो र मध्यम उद्यम क्षेत्र हो। यसको विकास हाम्रो युवा युवतीहरूको लागि र अझ आम जनताको क्षमतावान बनाउन अझ बढी अवसरहरू उपलब्ध गराउनको लागि मेरो सरकारको रणनीति र योजनाको एक प्रमुख तत्व हो। हामीले उपकरणहरू पहिले नै राखेका छौं, र हामी सबै उपायहरू प्रस्तुत गर्न जारी गर्नेछौं जसले साना र मझौला उद्यमहरूको विकास र फूलोफनलाई सामंजस्यपूर्ण र न्यायपूर्ण ढ help्गले मद्दत गर्दछ।
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी साना र मझौला उद्यमहरूलाई अझ बढी सहयोग पुर्‍याउन कानून बनाउने छौं। यो नयाँ कानूनको साथ, एसआर २250,000०,००० भन्दा कम आम्दानी भएका साना व्यवसायहरूले सेशेल्स राजस्व आयोगको प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा नपरीकन केवल सेन्पामा दर्ता गर्नुपर्नेछ। नयाँ कानूनले साना र मझौला उद्यमहरूलाई creditणमा बढी पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ र, केहि मामिलामा, साना अभिनव व्यवसाय स्टार्ट-अपहरूको अनुदानबाट फाइदा लिन सक्छ। हामी सेचेलोइसका हातहरू खाली गर्दैछौं!
उही समयमा इजाजतपत्र प्रक्रियाहरू अगाडि सरलीकृत गरिनेछ। साना उद्यमहरूका केटि कोटीहरू एक हप्ताको अवधिमा उनीहरूको इजाजतपत्रहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्। तिनीहरू लागू हुने स्वास्थ्य र वातावरणीय नियमहरूको अनुरूप उनीहरूको अनुकूलता सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरिएमा आफ्ना सञ्चालनहरू सुरू गर्न सक्षम हुनेछन्। यहाँ फेरि, हामी सानो सेचेलोइस व्यवसायका हातहरू खाली गर्दैछौं!
यी उपायहरू सबै सेचेलोइस, जसले त्यसो गर्न चाहान्छन्, उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरू गर्न र हाम्रो देशको समृद्धि र हाम्रा जनताको भलाइमा योगदान पुर्‍याउनका लागि लक्षित छन्। उपायहरू नोकरशाही घटाउने र सेवा डेलिभरी सुधार गर्ने उद्देश्य पनि छन् - मुद्दाहरूको बारेमा जुन मैले धेरै बोलेको छु र जसलाई मैले सम्बोधन गर्दैछु।
मेरो सरकारले यसका सबै नागरिकहरूको पहलमा विश्वास गर्दछ। हामी उत्पादन क्षमता बढाउने र सेवा पुर्‍याउने सुधार गर्ने उद्देश्यका उपायहरू सधैं राख्छौं। यी केही प्रोत्साहनहरू साथ हुनु आवश्यक छ। हामी कडा परिश्रम, उत्पादकता र नवीनता पुरस्कृत मा विश्वास गर्दछौं। उपायहरूको एक हिस्साको रूपमा, जनवरी २०१ in मा, सबै सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू जो निश्चित अवधिमा सम्झौतामा छैनन् उनीहरूले उनीहरूको प्रदर्शनको आधारमा १ 2016 औं महिनाको तलब पाउनेछन्। उपाय संवैधानिक नियुक्तिहरूमा लागू हुँदैन। केहि निजी कम्पनीहरूले पहिले नै यस प्रकारको प्रोत्साहनका लागि काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई राम्रो प्रदर्शनको लागि पुरस्कृत गर्न। हामी साना र मझौला उद्यमहरूमा यसको प्रभाव घटाउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अरुलाई पनि त्यस्तै गर्न प्रोत्साहन दिनेछौं।
हाम्रो बुजुर्ग नागरिकहरूको मर्यादा र सान्त्वना, र समर्थन, र जो काम गर्न असमर्थ छन्, साथसाथै हाम्रो समाजमा बढी कमजोरहरू, यो सरकारको सँधै चिन्ताको विषय बनेको छ। यस बर्षको शुरूमा मेरो राज्यको देश सम्बन्धी ठेगानामा मैले अवकाश निवृत्तिभरणहरूको बारेमा कुरा गरें। मैले भने यो स्थिर रहन सक्दैन र हामी यो बढाउने सम्भावनालाई हेर्नेछौं, बजेट स्रोतको आधारमा। सबै कुरालाई विचारमा लिएपछि, आज म यो खुशी पार्न खुशी छु कि हामी यो गर्न सक्छौं भनेर घोषणा गर्न। र हामी यो गर्नेछौं। डिसेम्बर २०१ 2015 देखि, सेवानिवृत्ति निवृत्तिभरणहरू प्रति महिना SR500 ले वृद्धि हुनेछ। प्रति महिना एसआर of०० को बृद्धि सरकारी पेन्सनका लाभार्थीलाई पनि लागू हुनेछ। यसले दर्शाउँछ कि हामी आफ्नो देशको सेवामा समर्पित भएका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न दृढ प्रतिबद्ध छौं। हामी हाम्रा बुढेसकालका नागरिकहरू, वा बढी कमजोर मानिसहरूलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं।
म यो अवसर लिन्छु हाम्रा धेरै वृद्ध नागरिकहरूको प्रयासलाई सलाम गर्न जसले मेरो स्वतन्त्रतालाई सफल बनाउन धेरै बर्षदेखि योगदान पुर्‍यायो।
उनीहरू जान्दछन् ती दिनहरूमा कसरी चीजहरू हुन्थ्यो। र तिनीहरूले आज भिन्नता देख्दछन्।
बुढ्यौली पुस्ताहरु मध्ये ती मानिसहरु हुन् जसले स्वतन्त्रता भन्दा पहिले काम गरेका थिए र आजको बेलायतको प्रशासनबाट पेन्सनबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्। तिनीहरूमा सेचेलोइस नाविकहरू छन् जसले शाही फ्लीट सहायक (आरएफए) ट्या tan्कर र अन्य ब्रिटिश जहाजहरूमा सेवा गर्थे। मेरो सरकारले उनीहरूलाई २०१ financial देखि पूर्व ग्रेटिया भुक्तानीको रूपमा केही आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ। यो उनीहरूको योगदानको मान्यता हो। हामी उनीहरूलाई बेलायती सरकारबाट सहायता र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पहलमा सहयोग गर्न जारी राख्छौं।
मैले हाम्रो समाजका बढी कमजोर सदस्यहरूको उल्लेख गरेको छु। ती मध्ये एकल आमाहरू पनि छन्। मैले सँधै हाम्रा युवा मानिसहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतासाथ लिन आग्रह गरेको छु। र म यो जारी राख्नेछु। अभिभावक बन्नु एक प्रमुख जिम्मेवारी हो जुन व्यक्तिले प्रतिनिधि वा त्याग्न सक्दैन। मेरो सरकार धेरै एक्लो आमाहरूका कठिन अवस्थाबाट सचेत छ। एकै साथ हामी उनीहरूको सम्पूर्ण एकीकरण समाजमा सहयोग गर्न चाहान्छौं, विशेष गरी उत्पादक र पारिश्रमिकको माध्यमबाट। यस लक्ष्यमा सरकारको योगदानका रूपमा र दैनिक हेरचाहको लागतलाई पनि ध्यानमा राखे जुन धेरै आमाहरूका लागि हुनसक्दछ, हामीले डे-केयर सेन्टरहरूलाई थप सहयोग पुर्‍याउने निर्णय गरेका छन, जसले आमाहरूलाई बढी जोखिममा पारिरहेका छन्। हामीले लिइरहेका उपायहरूले सबै आमाहरूलाई फाइदा पुग्नेछ - एकल आमाहरू मात्र होइन - यदि उनीहरूले सम्बन्धित मापदण्ड पूरा गरे भने। फेरि पनि हामी आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतासाथ लिऔं। हामी काम गरौं र आफ्नै भलाई र देशको विकासको लागि योगदान गरौं।
तपाइँलाई थाहा छ हाम्रो वातावरणको संरक्षणको लागि हाम्रो संघर्षको गहनता र मेरो सरकारले नवीकरणीय उर्जामा लगाएको महत्त्व। हाम्रा सिद्धान्तहरू विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त छन् र उनीहरूले वातावरण र प्रख्यात साना टापु राज्यहरूको हितको रक्षा गर्न हाम्रो प्रतिष्ठा प्रबल गरेका छन्। हामी उदाहरणद्वारा नेतृत्व गर्न जारी राख्न चाहन्छौं। नवीकरणीय उर्जा हाम्रो रणनीतिको प्रमुख अंश हो, न केवल वातावरणमा सकारात्मक प्रभावको कारणले तर यसको आर्थिक मूल्यको कारण पनि। यसैले हामी प्रत्येक सेचेलोइस परिवारको नवीकरणीय उर्जामा पहुँच गर्न चाहन्छौं। हामी केवल परिवारहरूलाई उनीहरूको घरमा सौर्य प्यानेल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहँदैनौं, तर हामी उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा पनि सहयोग गर्न चाहन्छौं। अर्को वर्षदेखि सरकारले खास मापदण्ड पूरा गर्ने परिवारहरूको लागि सौर्य प्यानलहरूको स्थापनालाई अनुदान दिने छ, मुख्यतया सामूहिक घरेलु आम्दानी। यो प्रत्येक नयाँ घर र भवनको लागि यसको आफ्नै सौर प्यानल स्थापना गर्न अनिवार्य हुनेछ। यहाँ पनि, निर्धारित मापदण्डको आधारमा सबवेसनको एक निश्चित स्तर लागू हुन सक्छ।
उही लक्ष्यलाई दिमागमा राख्दै, १ July जुलाई २०१ from देखि सबै विद्युतीय सवारी साधनहरूको शुल्क खारेज गरिनेछ। एकै साथ संकर सवारी सवारी साधनहरूमा लाग्ने शुल्क 15 %मा घटाइनेछ। यस उपायले हाम्रो स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको नीतिलाई बढावा गर्न मद्दत गर्दछ।
नवीकरणीय उर्जा भविष्य हो। यो नीलो अर्थव्यवस्था पूरक। यो हामीले छनौट गर्नुभएको भविष्य हो र यसले हाम्रा बालबालिका, हाम्रा बालबालिका र भविष्यका पुस्ताहरूको बचाउ सुनिश्चित गर्दछ। यो चिरस्थायी र दिगो भविष्य हो।
निलो अर्थव्यवस्था हाम्रो दुई मुख्य उद्योगहरूको आधार हो। साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूले उत्साहका साथ यो अवधारणा अपनाइरहेका छन्। एक अवधारणा जुन नवीन, दूरदर्शी र इनामदायी छ। हामी चाहन्छौं कि नीलो अर्थव्यवस्था अझ बढी साना व्यवसाय र साना उद्यमहरूको फाइदा होस्। यसलाई प्रोत्साहित गर्न हामी एक कार्यक्रम ल्याउँदैछौं जसबाट सरकारले loansण प्रदान गर्दछ - विकास बैंक र एसबीएफए (साना व्यवसाय वित्त एजेन्सी) मार्फत - विशेष गरी साना र मझौला उद्यमहरूका लागि जुन नीलो अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सुरू गर्न चाहान्छन्। त्यहाँ प्रशलिन र ला डिगको लागि विशेष विचार हुनेछ जहाँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सम्भावना सीमित छ, र विशेष गरी ला डिगको मामलामा। हाम्रो उद्देश्य, फेरि एकपटक, हाम्रा मानिसहरूलाई सशक्त बनाउनु हो, विशेष गरी हाम्रो युवालाई, संघर्ष र जीविका चलाउन।
नीलो अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा वातावरणीय संरक्षण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, म पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा केही शब्द भन्न चाहन्छु। यस पूर्वाधारले हामीलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ। हामीसँग धेरै पर्यटन प्रतिष्ठानहरू छन् जुन कि हामी सेचेलोइस उद्यमीहरूको हातमा छ वा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्वामित्वमा छन्। ती मध्ये धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित हुन् जसले हाम्रो देशलाई प्रतिष्ठा दिन्छन्। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय होटेल चेनहरूको उपस्थितिले सेशेल्समा हाम्रो विश्वासमा उनीहरूको विश्वासको प्रमाण दिन्छ। यसको लागि म उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। होटल र गेस्टहाउसका मालिकहरू उनीहरूले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा खेल्ने प्रमुख भूमिका र हाम्रो अर्थव्यवस्थामा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदानका लागि म सेचेलोइस मालिकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु।
मैले परामर्श लिए र सुने। म आज विश्वस्त छु कि नयाँ ठूला होटेलहरूको निर्माण रोक्न, र सेशेल्सले प्रस्ताव गरिरहेका अनौंठो उत्पादनहरूलाई समेकित र बृद्धि गर्ने समय आइसकेको छ। फलस्वरूप, मेरो सरकारले तत्काल प्रभावमा माहे र भित्री टापुहरूमा ठूला होटेल प्रोजेक्टहरूमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ, जसका लागि स्वीकृत भइसकेका परियोजनाहरू बाहेक वा सरकारले प्रतिबद्धता गरेको थियो। । एक वाह्य क्षमता अध्ययन, स्थानीय र विदेशी विशेषज्ञता संग सञ्चालन, भविष्य मा सबै पर्यटन विकास परियोजनाहरु मा आवश्यक र सूचित निर्णय लिन सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। यो रणनीति सेचेलोइस द्वारा संचालित साना होटेलहरूको लागि अधिक ठाउँ र अवसरहरू सिर्जना गर्दछ।
मैले आफ्नो राज्यको राष्ट्रभाषामा क्याप टर्ने प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरें। दुर्भाग्यवस, यस परियोजना को बारे मा अटक र आरोप आरोप जारी छ। आज म यी सबै कल्पनाहरूको लागि एक पटक र सबैको लागि एक स्टप राख्न चाहन्छु। क्याप Ternay मा कुनै होटल को निर्माण हुनेछ। यो अनुपम साइटले ब्लू इकोनोमी ईन्स्टिट्यूट, र युवाहरूको लागि सुविधाहरू होस्ट गर्नेछ। यो साइटको सबै भन्दा राम्रो प्रयोग हो, सबै सेचेलोइस र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको फाइदाको लागि।
धेरै अवसरहरूमा मैले सेशेल्सलाई ज्ञान आधारित समाज, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने हाम्रो महत्वाकांक्षाको बारेमा भनेको छु। एउटा समाज जहाँ प्रत्येक परिवारमा एक वा बढी स्नातकहरू हुन्छन्। यो बिस्तारै भइरहेको छ। हाम्रो महत्वाकांक्षा प्राप्ति योग्य छ, तर यो सबै ध्वनि शिक्षाको साथ शुरू हुनुपर्छ। फाउंडेशनको गुणस्तर र हाम्रो शिक्षा प्रणालीको संरचनाको सुदृढीकरण गरेर, ताकि यसले नयाँ सेशल्सको आवश्यकता र अपेक्षाहरू अझ राम्ररी पूरा गर्न सक्दछ। यो त्यस्तो विषय हो जुन राष्ट्रिय परामर्श फोरममा धेरै बहसको विषय भएको छ। र म फोरमका सदस्यहरूलाई उनीहरूको सल्लाह र सल्लाहका लागि धन्यवाद दिन्छु जुन उनीहरूले शिक्षाका बारेमा गरेका छन्।
धेरै विचार-विमर्श पछि, मेरो सरकारले अनिवार्य शिक्षाको अवधि १० बर्षदेखि ११ बर्ष बढाउने निर्णय गरेको छ, जुन माध्यमिक to सम्म हुनेछ। यसले हाम्रो युवालाई माध्यामिक-माध्यमिक शिक्षाको लागि तयार गर्दछ, उनीहरूलाई कामको संसारको लागि अझ सुसज्जित पार्नेछ , र तिनीहरूलाई अझ राम्रो नागरिक बन्न मद्दत गर्नुहोस्।
यो राम्रो छ कि हामी निरन्तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सुधार र बढावा दिइरहेका छौं। यो राम्रो छ, तर यो एक्लो पर्याप्त छैन। पोस्ट-माध्यमिक संस्थामा अध्ययन पूरा गर्ने सबै युवाहरूसँग हामी के गर्छौं? के अवसरहरू, के आशा, हामी ती सबै युवाहरूलाई कामको दुनियामा उनीहरूको एकीकरणको लागि दिन्छौं? सन्तोषजनक क्यारियरको सुरुको लागि?
मेरो सरकार निरन्तर यस विषयमा प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। सेशेल्सका युवाहरू भविष्यका हुन्, सेशेल्सका युवाहरू हाम्रो देशको आशा हुन्। हामी कसरी उनीहरूको सपना, तिनीहरूको महत्वाकांक्षा, उनीहरूका आकांक्षाहरू महसुस गर्न मद्दत गर्छौं? मलाई लाग्छ कि मुख्य उपायहरू मध्ये एउटा उनीहरूलाई सभ्य, उत्पादक र पारिश्रमिक कार्यको अवसर प्रदान गर्नु हो जसले उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकतम क्षमता बुझ्न सक्दछ। निजी क्षेत्रको साथ साझेदारी - विशेष गरी यसको प्रमुख प्रतिनिधि सेशेल्स चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री - अपरिहार्य छ।
सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई थप युवा भर्ना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ जसले पोस्ट-माध्यमिक संस्था पूरा गरेका छन् र बेरोजगार छन्। प्रोत्साहनको रूपमा हामी प्रस्ताव गर्दैछौं कि एक वर्षको अवधिमा निजी कम्पनीहरूले रोजगारीमा लिएका त्यस्ता युवा व्यक्तिहरूको तलबको of०% सरकारले एक महिनामा अधिकतम 40००० सम्ममा तलब दिन्छ। हामी २०१ scheme मा यो योजना लागू गर्न सुरु गर्नेछौं।
आउनुहोस्, हामी हाम्रो युवाको विकासको लागि मिलेर काम गरौं। तिनीहरूलाई उदाहरणीय कामदार बन्न मद्दत गर्नुहोस्। तिनीहरूका हातहरू खाली गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई देशको दिशा लिनको लागि तयार गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी आफ्ना बच्चाहरूलाई हामी कसरी मानिस हौं र हामी सँगै सम्पन्न गरेका चीजहरूको कदर गर्न शिक्षा दिनुहोस्। हामी उनीहरूलाई भविष्य निर्माण गर्न सिकाउँछौं।
स्वतन्त्रता अमूल्य छ। एक मान्छे को मर्यादा को लागी कुनै मूल्य छैन। १ 29 1976 को २ June जूनमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता र मर्यादा पाएका छौं। हाम्रो गौरव र एक राष्ट्रको रूपमा हाम्रो पहिचान। हामीलाई हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त समर्थन गर्न जारी गरौं। हामी हाम्रो नैतिक र आध्यात्मिक मूल्यमान्यताहरू जारी राख्न गरौं। हाम्रो क्रेओल मानहरू। र हामी यी बच्चाहरु लाई हाम्रा बच्चाहरुमा समेट्ने गरौं।
हामी तयार छौं र सधैं तयार हुनेछौं! उर्जा, लचिलोपन, लडाई भावना, हाम्रा जनताको एकता, पहिले भन्दा शक्तिशाली छन्। आज हाम्रो जनतालाई उत्साहित पार्ने दृढ संकल्प पहिलेभन्दा झन शक्तिशाली छ, जति बेला हामी आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि स fighting्घर्ष गर्दै थियौं। नयाँ क्षितिजमा यात्रा गर्न र नयाँ सीमाहरू पार गर्न हाम्रो कटिबद्धता पहिलेभन्दा अझ बलियो छ। यी ती हुन् जुन हामीलाई राष्ट्रको रूपमा बल दिन्छन्। यी ती हुन् जुन हामीलाई एकतामा बाँध्छन्। यी ती हुन् जसले हामीलाई सेशेल्सको लागि उत्तम भविष्यतर्फ हेर्न अनुमति दिन्छ, र हामी कहिले पनि पछाडि फर्कनेछैनौं।
आज, ऐतिहासिक घटनाको 30० बर्ष पछि, हामी गर्वका साथ तेस्रो गणतन्त्रको झण्डा फहराउँछौं जबकि राष्ट्रिय गानले हामीलाई हाम्रा गम्भीर दायित्वहरूको सम्झना दिलाउँछ। यी नयाँ सेशेल्सको गर्व, एकता र भ्रातृत्वको शक्तिशाली प्रतीकहरू हुन् जुन हामीले तेस्रो गणतन्त्र स्थापना गर्दा आफ्नै बचाउको लागि प्रतिबद्ध भयौं।
हाम्रो स्वतन्त्रता पछि years years बर्ष पछि ... आज हामीले मनाइरहेको घटना हाम्रो राष्ट्रिय एकताको एक शक्तिशाली प्रतीक हो, जुन हामीले दैनिक जीवनमा र हाम्रो कार्यहरूमा अपनाउनुपर्दछ। विभाजनहरू मेटाउन प्रतीक जसले गर्दा हामी सबै एकसाथ खडा हुन सक्षम छौं, गर्वसाथ, भ्रातृत्वको नयाँ भावनाको शपथ लिन, शान्ति, सद्भाव र स्थिरतामा नयाँ सेशेल्सका लागि एकसाथ काम गर्ने।
यो नयाँ उत्सवको अवसर हो, एक गम्भीर क्षण जसले हामीलाई सँधै एकजुट गर्नेछ।
आज हाम्रो दिन हो!
हामीलाई इतिहास बनाउनको लागि यस ऐतिहासिक क्षणलाई प्रयोग गरौं!
सेशेल्सका प्रिय व्यक्तिहरू।
म तपाई सबैलाई स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिन्छु। भगवानले हाम्रो देशलाई आशिष् र सुरक्षा दिन जारी राख्नुहुन्छ, परमेश्वरले सेचेलोइस मानिसहरूलाई आशिष् दिन जारी रहोस्! हामी सबै सेशेल्सलाई प्रेम गर्छौं!
सेशेल्स यसका संस्थापक सदस्य हुन् पर्यटन पार्टनरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन (ICTP) .